ချစ်မင်းယုပါ - MYSTERY ZILLION
chitminyu June 2008 edited June 2008 in Intro Myself ကျွန်တော့နာမည် ချစ်မင်းယု ပါ ခင်ဗျာ..အားလုံး ကို ခင်ချင်ပါမယ်........ မှတ်ချက်များ
Star Lay June 2008 edited June 2008 Registered Users Warmly welcome from MZ, Ko Chist Min Yu. :6::6::6: sithu015 June 2008 edited June 2008 Administrators welcome welcome welcome ကြိုဆိုပါတယ်။ aTxIvG4001 June 2008 edited June 2008 Moderators ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ မင်္ဂလာပါ။မာ့ခ် MrDBA June 2008 edited June 2008 Administrators မင်္ဂလာပါဗျာ .. ကြိုဆိုပါတယ် ... လေ့လာ ဆွေးနွေးပေးပါ။ :67::67: kotharthar June 2008 edited June 2008 Registered Users ချစ်မင်းယု ဆိုတဲ့ နာမည်က ကဗျာဆန်တယ် နော်။ဆရာ မင်းယုေ၀ နဲ့ ဘာတော်လည်း။ :pဘာပဲတော်တော် မတော်တော် ကြိုဆိုပါတယ် ခင်ဗျာ။ တက်လူ June 2008 edited June 2008 Registered Users ကိုချစ်မင်းယုကိုကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား ဆွေးနွေးဖိုလူသစ်တိုးတာပေါ့:103: icefirester June 2008 edited June 2008 Moderators [quote=chitminyu;7410]ကျွန်တော့နာမည် ချစ်မင်းယု ပါ ခင်ဗျာ..အားလုံး ကို ခင်ချင်ပါမယ်........ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ....ice ညမီးအိမ် June 2008 edited June 2008 Registered Users, Moderators နာမည်လေးကတော့တော်တော်လှတယ်နော်။ ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ(နာမည်လှလို့ဟုတ်ဖူးနော်:1:)။ á€±á€á€šá€¶ June 2008 edited June 2008 Registered Users ကိုချစ်မင်းယု ကို နွေးနွေးထွေးထွွွေးကြိ ုဆိုပါတယ်.....ဒီထက် ထက်ပြီးနွေးချင်ရင်တော့ အနွေးထည်လေးနဲ ကြိ ုဆိုပါ့မယ်.....ွyeman June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=ေ၀ယံ;7467]ကိုချစ်မင်းယု ကို နွေးနွေးထွေးထွွွေးကြိ ုဆိုပါတယ်.....ဒီထက် ထက်ပြီးနွေးချင်ရင်တော့ အနွေးထည်လေးနဲ ကြိ ုဆိုပါ့မယ်..... ွကြိုဆိုပါတယ် ကိုချစ်မင်းေ၀...အနွေးထည်ကြီးနဲ့တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ. . . သနားပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော်တော်ပူနေတယ်ပြောတယ်။ heater လောက်နဲ့ပဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဟဲဟဲ စတာနော် စိတ်ဆိုးနဲ့ :Dမသိတာရှိလျှင် မေးသာမေးပါ အားမနာနဲ့။ ကျွန်တော်ကိုမဟုတ်ဘူးနော်။ သိတဲ့လူတွေကို ... :P သိထားတာလေးတွေကို ပြောပြပါ။ ခင်မင်လေးစားလျှက်... ko-edit June 2008 edited June 2008 Registered Users welcome ပါ...:1:mz မှကြိ ုဆိုပါတယ်:6:ko-edit dotNetCrazy June 2008 edited June 2008 Registered Users မင်္ဂလာပါ ... ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျား ... (မင်းမကြိုလဲလာမှာဘဲလို့တော့ ဘုမတောလိုက်ပါနဲ့ :d) megalomanicboy June 2008 edited June 2008 Registered Users မာကလာပင်:d:d:d shinnaymin88 June 2008 edited June 2008 Registered Users ကျနော်ပထမပြောချင်တာက မာလကာ အဲ မင်္ဂလာပါ ။ ဒုတိယက တော့ ကူညီပါ ။တတိယက တော့ ကြိုဆိုပါတယ် ။ :6::6::6::6:___________________________________________________________________________တကောင်ထဲပဲ ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့ bhope June 2008 edited June 2008 Registered Users Mz မှနွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ :6::6::6::6: ဒီဆွေးနွေးချက် ကို ပိတ်ထား ပြီးပါပြီ။